डा. दर्नाल आए संगै रुपन्देहीमा रहेको भिम अस्पतालको मुहार फेरिदै
कृष्ण परियार, अर्घाखाँची ।
असोज १२,अर्घाखाँचीबुलेटिन -मेडिकल सुपरिटेण्डेण्टको रुपमा नियुक्त भएर आएसगै डा.नविन दर्नाल रुपन्देहीमा रहेको भिम अस्पताल सुधारको योजनामा निकै अघि बढ्नु भएको छ ।
१९९० सालमा स्थापना भएको रुपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिका मा अबस्थित जिल्लाको पुरानो भिम अस्पताल हो पूर्वी र दक्षिणी भेगका ५ लाख जनसंख्याले लाभ लिदै आएका छन अस्पताल भए पनि पुर्वाधार विकास र दक्ष जनशक्तिको अभावमा रहेको थियो ।
स्थापना कालमा ३ शैया बेडबाट सुरु भएको अस्पताल २०३५ सालमा १५ शैया र २०४१ सालबाट २५ शैया बेडको सुविधा प्रदान गर्दै आएको थियो। २ विगाह १० कठ्ठा क्षेत्रफलमा रहेको अस्पतालबाट तिहार पछि २४ सै घण्टा फार्मेसी, ल्याब र एक्सरे सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्यका साथ कार्यायाेजनाl अगाडी बढाइएको मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट डा. दर्नालले बताउनु भयो।
त्यसै गरी शल्यक्रिया सेवालाई पनि छिट्टै सञ्चालनमा ल्याउने बताउनु भयो उहाँकै शल्यक्रिया सेवा अन्तर्गत पेट चिरेर पाठेघरको अपरेशन रहेको बताउनु भयो। त्यस्तै गरी बालरोग सम्बन्धि विशेषज्ञ सेवा, जनरल फिजिसियन सेवा पनि सुचारु गर्ने तयारीका साथ काम गरिरहेको बताउनु भयो । उहाले अस्पतालको विकासका लागि अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीहरुको टिम निर्माण गरेर अगाडि बढेको उल्लेख गरे ।
उनले अस्पताललाई सफा र सुन्दर कायम गर्नका लागि अस्पताल परिषरमा फुलवारी (बगैचा) निर्माण गर्ने, शुद्ध पिउने पानीको व्यवस्था तथा ओपिडीमा चेकजाँचका लागि टिकट लिने ठाँउमा भिड बढेका कारण भिडको व्यवस्थापन र बिरामीको सहजताका लागि टोकन सिस्टम लागु गर्ने जानकारी दिए । हाल उक्त अस्पतालबाट वार्षिक ७० हजारको हाराहारीमा बिरामीले सेवा लिइरहेको भिम अस्पतालका अहेव गोपाल उपाध्यायले जानकारी दिए ।
उनले हालै आउनु भएका डा. दर्नाल अस्पताल सुधारका लागि निकै जोश र जाँगरका साथ योजनाबद्ध ढंगले अगाडि बढेकाले रुपन्देहीवासीले निकै आसा लिएका छ्न । नेपाल रेडक्रस सेसाईटीको सहकार्यमा भीम अस्पतालमा रक्त सञ्चार केन्द्र स्थापना गर्ने योजना रहेको डा. दर्नालले जानकारी दिनु भयो ।